မင်းသမီးချော Go Sung Hee အတွက် လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk – Trend.com.mm
မင်းသမီးချော Go Sung Hee အတွက် လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk
Posted on October 10, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချော Lee Jong Suk ဟာ “While You Were Sleeping” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသမီး Go Sung Hee အတွက် လက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အတွက် အားတင်းထားရအောင် ရိုက်ကွင်းကို ကော်ဖီကားတစ်စီးပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Lee Jong Suk က ကော်ဖီဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ထားသေးတာဖြစ်လို့ အခုသူ့ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကနေလက်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့တာပါပဲ။အခုလက်ရှိမှာ Go Sung Hee ဟာ “Ms Ma, Nemesis”ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ရိုက်ကူးနေတာပါ။
အောက်တိုဘာ ၉ရက်နေ့က Go Sung Hee ဟာ Lee Jong Suk ပို့ပေးတဲ့ ကော်ဖီကားနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ကော်ဖီကားမှာစာလေးတောင်ပါပါသေးတယ်။ဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့ “Sung Hee ရေ ဒီနေ့တော့ ဆိုဂျူအစားကော်ဖီသောက်ရအောင်! “ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ Sung Hee ကိုဂရုစိုက်ပေးပါ။သူမက အရမ်းနူးညံ့ကြင်နာတတ်ပါတယ်!”လို့ Jong Suk က ရေးထားတာပါ။
하루종일 아프다고 골골대다가…🤭😭♥️ 고마워요 힘이나고 신이 납니다 @jongsuk0206 🔥 #이은혜잊지않겠소 #89맨션 #커피차 #츄러스 👍💯💯
A post shared by 고성희 / Ko, Sung-Hee (@krnangel621) on Oct 9, 2018 at 12:18am PDT
Go Sung Hee ကလည်း ပုံလေးနဲ့အတူ “ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ကျွန်မနေမကောင်းသလို ခံစားနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီကကော်ဖီကားရောက်လာတော့ ကျေးဇူးလည်းတင်ပြီး အားလည်းပိုရှိသွားတယ်”ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Lee Jong Suk ကို Tag တွဲပြီး “ဒီလိုကြင်နာမှုအတွက် မမေ့ပါဘူး”ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပဲ အတူတူရိုက်ဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း ကိုယ့်အနုပညာမောင်နှမအချင်းချင်း ဒီလိုအားပေးမှုတွေကအမြဲမြင်တွေ့နေရတာ ၀မ်းသာကြည်နူးစရာပါပဲ။
တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြော Lee Jong Suk ဟာ “While You Were Sleeping” ဇာတျလမျးတှဲမှာ တှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့ဖူးတဲ့ မငျးသမီး Go Sung Hee အတှကျ လကျဆောငျပို့ပေးခဲ့ပါတယျတဲ့။
သူမရဲ့ ဇာတျလမျးတှဲအသဈအတှကျ အားတငျးထားရအောငျ ရိုကျကှငျးကို ကျောဖီကားတဈစီးပို့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။Lee Jong Suk က ကျောဖီဆိုငျလေးလညျးဖှငျ့ထားသေးတာဖွဈလို့ အခုသူ့ရဲ့ ကျောဖီဆိုငျကနလေကျဆောငျပို့ပေးခဲ့တာပါပဲ။အခုလကျရှိမှာ Go Sung Hee ဟာ “Ms Ma, Nemesis”ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲအသဈရိုကျကူးနတောပါ။
အောကျတိုဘာ ၉ရကျနကေ့ Go Sung Hee ဟာ Lee Jong Suk ပို့ပေးတဲ့ ကျောဖီကားနဲ့တှဲရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံလေးတှကေိုတငျခဲ့ပါတယျ။ကျောဖီကားမှာစာလေးတောငျပါပါသေးတယျ။ဘာရေးထားတာလဲဆိုတော့ “Sung Hee ရေ ဒီနတေ့ော့ ဆိုဂြူအစားကျောဖီသောကျရအောငျ! “ကြေးဇူးပွုပွီး ကြှနျတျောတို့ Sung Hee ကိုဂရုစိုကျပေးပါ။သူမက အရမျးနူးညံ့ကွငျနာတတျပါတယျ!”လို့ Jong Suk က ရေးထားတာပါ။
Go Sung Hee ကလညျး ပုံလေးနဲ့အတူ “ဒီနတေ့ဈနလေုံ့း ကြှနျမနမေကောငျးသလို ခံစားနရေတာပါ။ဒါပမေဲ့ သူ့ဆီကကျောဖီကားရောကျလာတော့ ကြေးဇူးလညျးတငျပွီး အားလညျးပိုရှိသှားတယျ”ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရေးခဲ့ပါတယျ။ပွီးတော့ Lee Jong Suk ကို Tag တှဲပွီး “ဒီလိုကွငျနာမှုအတှကျ မမပေ့ါဘူး”ဆိုပွီးပွောခဲ့ပါသေးတယျ။
ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲတဈခုပဲ အတူတူရိုကျဖူးတယျဆိုပမေဲ့လညျး ကိုယျ့အနုပညာမောငျနှမအခငျြးခငျြး ဒီလိုအားပေးမှုတှကေအမွဲမွငျတှနေ့ရေတာ ဝမျးသာကွညျနူးစရာပါပဲ။
အလုပ်အမြဲများနေတဲ့ Busy Parents တွေအတွက်